Wasiirka Sacuudiga: Waxaan taageersanahay caadi ka ahaanshaha xaalada ... xiriirka aan la leenahay Turkigana waa mid wanaagsan - Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeWararka MaantaWasiirka Sacuudiga: Waxaan taageersanahay caadi ka ahaanshaha xaalada … xiriirka aan la leenahay Turkigana waa mid wanaagsan
Wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganeysa wasiirka Sacuudiga ayaa sheegtay in xiriirka uu la leeyahay Turkiga uu yahay mid wanaagsan oo wanaagsan, maalin kadib wadahadal dhanka taleefanka ah oo dhexmaray King Salman bin Abdulaziz iyo Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Sucuudiga ayaa ku sheegay wareysi uu siiyay wakaaladda wararka ee Reuters in aysan jirin xog muujineysa qaadacaada aan rasmiga ahayn ee wax soo saarka Turkiga.
Fiidnimadii Jimcaha, xafiiska madaxweynaha Turkiga wuxuu ku dhawaaqay xiriirka ka dhex dhacay Boqor Salmaan iyo Erdogan maalin ka hor shirkii macmalka ahaa ee G20 oo ay abaabushay Riyadh.
Wuxuu sharaxaad ka bixiyay in raadinta dhamaadka khilaafka Qadar “ay sii socoto”, laakiin wuxuu cadeeyay in xalka “ay kuxirantahay wax ka qabashada dhibaatooyinka amniga.”
Wasiirka Sacuudi Carabiya wuxuu taageeray “iswaafajin buuxda oo lala yeesho Israel, iyadoo lagu xiray shuruud ah in heshiis nabadeed oo joogto ah la gaaro kaas oo damaanad qaadaya dowlad Falastiin”
Wuxuu tilmaamay in magacaabista Washington ee kooxda Xuutiyiinta Yemen inay tahay “urur argagixiso” ay gabi ahaanba ku habboon tahay.
Mar sii horeysay, Wasiiru Dowlaha Arimaha Dibadda ee Sacuudiga, Adel Al-Jubeir ayaa sheegay in hanjabaadaha uu jeediyay Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Joe Biden intii uu ku guda jiray ololihiisa doorashada ay ahaayeen “hadalada musharaxa, ee ma ahan hadalo madaxweyne.”
Al-Jubeir wuxuu intaa ku daray intii uu socday faragalinta Mareykanka “CNN”, Sabtidii, in madaxweynayaashu “inta badan ay dhahaan waxyaabaha inta lagu jiro ololahooda doorashada in xaqiiqda siyaasadeed iyo murugsanaanta dantu ku qasbeyso inay wax ka beddelaan oo ay u dhaqmaan si ka duwan markii dambe ee ay qabtaan xilka madaxweynaha. ”
Al-Jubeir wuxuu tusaale u soo qaatay Madaxweynaha xilka ka sii degaya ee Mareykanka Donald Trump, kaasoo ku dhawaaqay mowqifyo aad u adag oo ku saabsan magaalada Riyaad intii lagu jiray ololihiisii ​​doorashada ee ugu horreeyay, markii uu doorashada ku guuleystayna, Sacuudi Carabiya ayaa ahayd meeshii ugu horreysay ee uu u safro.
Wasiirka Sacuudi Carabiya wuxuu yiri: “Riyaad” waxay kaliya ka shaqeysaa bayaanada uu soo saaray madaxweynaha markii uu xafiiska la wareego ee ma ahan musharax doorashada, “isagoo ula jeeda xiriirka wanaagsan ee dalkiisa uu la leeyahay Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga si isku mid ah.
Al-Jubeir wuxuu filayey in siyaasadda arrimaha dibedda ee Mareykanka xilligii Biden aysan markhaati ka noqon doonin isbeddel weyn, taasoo muujineysa in kan dambe uu leeyahay khibrad weyn oo siyaasadeed, maadaama uu ku jiray Senate-ka muddo 35 sano ah, ka dibna madaxweyne ku xigeenkii hore Obama.
Biden wuxuu ku hanjabay intii uu ku guda jiray ololihiisa doorashada inuu dib uga fiirsan doono xiriirka uu la leeyahay Riyadh sababo la xiriira kan dambe ee xuquuqda aadanaha, wuxuuna balan qaaday inuu joojin doono taageerada Washington ee Riyadh dagaalka ay kula jirto Yemen isla marka uu xukunka la wareego.
XOG CULUS:Turkiga oo Droneskiisa Soomaliya Geynaya Kadib Masar Iyo Israel Hanjabaad Military Soomaliya